Home Wararka Dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada ciidamada ay u direyso Koofurta Suudaan.
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada ciidamada ay u direyso Koofurta Suudaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tirada Askarta ay u dirayso dalka South Sudan, kuwaasoo qeyb ka noqonaya ciidamo ka socda dalalka gobolka Geeska Africa oo nabad ilaaliyaal ah.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa diyaarisay 99 Askari oo loo dirayo koofurta Sudan, si lamid ah dalka Jabuuti oo tiro intaasi la eg u diraya dalkan ugu da’da yar caalamka ee colaadda sokeeye ka socoto tan iyo 2013-kii.
Dalalka Kenya, Sudan iyo Uganda ayaa midkiiba diraya 499 Askari, waxayna ciidamadan waajibaadkooda shaqo noqon doonaa inay ilaaliyaan shacabka iyo hogaamiye-yaasha mucaaradka koofurta Sudan, kadib markii dhawaan heshiis nabadeed laga gaarey colaadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa balan-qaadey in Soomaaliya ciidan u dirayso Koofurta Sudan, kadib markii uu qeyb ka noqday madaxdii IGAD ee goobjooga u ahaa saxiixa heshiiska Nabadda South Sudan bishii September ee sanadkan ka dhacay Addis Ababa.
Soomaaliya ayaa waxay ku tiirsan tahay hadda ciidamada AMISOM, oo difaaca xarumaha dowladda iyo goobaha kale, iyadoo ciidamada qaranka aysan wali u diyaarsaneyn, awoodna u lahayn inay la wareegaan mas’uuliyadda amniga dalka.
Waxaa hakad ku yimid markii Farmaajo la doortay howshii isku-dhafka ciidamada kala duwan ee maamul goboleedyada, iyadoo khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira wadanka uu dhabar jab ku noqday qorshaha amniga Xukuumadda Soomaaliya.
MW Farmaajo oo ballan qaaday in uu dalka kaga sifeynayo kooxda Shabaab muddo laba sano gudahood ah aya ballanqaadkaas wax ka hagaagay aanay jirin. Kooxda Shabaab ay awoodoodi kor u dhigay iyagoo ka geysta dilal iyo qaraxyo joogta ah magaalada Muqdisho. Waxa dadbani ay walaac ka qabaan xiriirka u dhexeeya madaxda hay’adda sirdoonka NISA iyo kooxda Shabaab, waxaana la aaminsan yahay in ay dowladda Farmaajo ay si dadban ula shaqeyso kooxda Shabaab.
Previous articleSomali Government readies peacekeeping troops for South Sudan mission
Next articleMusuqmaasuqa iyo Maamul Xumada ka Jirta xafiiska wasiirka Maaliyadda oo Xadka Dhaaftay
Yaa ka danbeeyay dilkii afarta ruux ee lagu dilay Isgoyska Xaawo-taako...